We.com.mm - ပထမဆုံးမြင်တဲ့အကောင်ကို ရွေးလိုက်ပါ။သင်ဘယ်လို စိတ်ဒုက္ခတွေ ကြုံနေရလဲဆိုတာ သိနိုင်ပါလိမ့်မယ်
သင်နားလည်သည် ဖြစ်စေ၊ နားမလည်သည် ဖြစ်စေ၊ သင့်ရဲ့ မသိစိတ်ကိုတော့ လိမ်လို့မရနိုင်ပါဘူး။ လူတွေဟာ အပေါ်ယံ အသိစိတ်ကိုသာ ဖုံးကွယ်ထားနိုင်ပြီးတော့ မသိစိတ်ကိုတော့ ငြင်းဆန်လို့ မရနိုင်ပါဘူး။ သင့်ရဲ့မျက်လုံးတွေကတော့ ပုံတွေအားလုံးကို တွေ့နေရပေမယ့် သင့်ရဲ့မသိစိတ်ကတော့ သင်ခံစားနေရတာနဲ့ တိုက်ဆိုင်မှုရှိတဲ့ပုံကိုသာ မြင်ရလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ စိတ်ပညာရှင်တွေက ပုံလေးတစ်ပုံနဲ့ စမ်းသပ်ထားပါတယ်။ ဒီပုံလေးကို ဖျတ်ခနဲ ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ အရင်ဆုံး သင်မြင်လိုက်တဲ့ တိရိစ္ဆာန်လေးက သင့်စိတ်ထဲမှာ အကြီးမားဆုံး စိတ်အနှောင့်ယှက်ဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာကို ပြောပြနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ/ အချစ်ကိစ္စကြောင့် သင်စိတ် တော်တော်လေး ဖိစီးနေပါတယ်။ သင်ချစ်ရတဲ့သူနဲ့ အဆက်အသွယ်တွေ ပြတ်တောက်နေသလို ခံစားနေရပါတယ်။ တစ်ခါတလေ သင်တို့ရဲ့ ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုက ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာတောင် သင် မသေချာသလို ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင်တို့ပထမဦးဆုံး စပြီး ပတ်သက်မိခဲ့တဲ့ အချိန်ကို ပြန်စဉ်းစားကြည့်သင့်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သင်ခံစားနေရတဲ့ အကြောင်းကိုလည်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောပြသင့်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အဆင်ပြေဖို့ စကားမပြောဘဲနေတာထက် စကားပြောဆွေးနွေးတာက ပိုထိရောက်ပါတယ်။
အချိန်ကြာမြင့်စွာ ထမ်းရွက်ခဲ့ရတဲ့ တာဝန်ဝတ္တရားတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သင်ရုန်းကန်နေရတယ်။ သင်ဟာ သင်နဲ့ဆက်စပ်တဲ့ အရာရာတိုင်း၊ လူတိုင်းကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နေခဲ့ရတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်အတွက်တောင် သင်မေ့သလို ဖြစ်နေပါပြီ။ သင်ဟာ စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်တယ်၊ အရာရာကို ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းနိုင်တယ်လို့ သင့်သူငယ်ချင်းနဲ့ သင့်မိသားစုတွေက ယုံကြည်ထားကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ သင်ကတော့ တောင့်ခံနိုင်စွမ်းတွေ ကုန်နေပါပြီ။ အရာရာကို လွှတ်ချပစ်ချင်နေပါပြီ။ သင့်အနေနဲ့ တစ်ခါတလေတော့ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သင့်ရင် ဆန်ရပါမယ်။ အခုချိန်က သင့်အတွက်သင် တွေးရမယ့်အချိန်ရောက်ပါပြီ။
သင့်ကျန်းမာရေး (သို့မဟုတ်) သင့်မိသားစု တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက် သင်စိုးရိမ် ပူပန်နေရတယ်။ ကျန်းမာရေးအတွက် ပူပန်တယ်ဆိုတာတော့ ကောင်းတယ်လို့ ဆိုရပါမယ်။ ဒါမှလည်း ကျန်းမာတဲ့ ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံနဲ့ နေထိုင်ဖြစ်မယ် မဟုတ်လား။ ဒါပေမဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် အလွန်အကျွံ စိတ်ဖိစီးပူပန်နေတာမျိုးကျတော့ မကောင်းတော့ပါဘူး။ သင်ထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့အရာအတွက် ပူပန်နေလို့ရော ဘာထူးလာမှာလဲ။ အတတ်နိုင်ဆုံး ကျန်းမာရေးလိုက်စားပြီး ပျော်အောင်နေထိုင်ရုံကလွဲပြီး ဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူး။
သင့်ရဲ့အလုပ်အတွက် စိတ်ပူပန်နေရပြီး ငွေရေးကြေးရေးအတွက်လည်း စိတ်ဖိစီးနေရပါတယ်။ ကံမကောင်းစွာပဲ ယနေ့ခေတ်မှာ လူတိုင်းလိုလို အလုပ်ကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှု ကြာရှည်စွာ ခံစားနေကြရပါတယ်။ စီးပွားရေးတွေကျ၊ နိုင်ငံရေးကမကောင်း၊ ကုန်ဈေးနှုန်းကတက်၊ ငွေကြေးတွေ ဖောင်းပွနေတာကြောင့် ချမ်းသာပြီးသားသူတွေတောင် အလူးအလဲ ရုန်းကန်နေကြရတာပါ။ တစ်ဖက်မှာလည်း နည်းပညာတွေက အရမ်းတိုးတက်နေတာကြောင့် လိုက်မှီနိုင်အောင် ကြိုးစားနေကြရပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်အလုပ်အတွက် သင့်မှာ အရည်အချင်းအသစ်တွေ လိုအပ်နေသေးတယ်ဆိုရင် သင်လိုအပ်နေသေးတယ်ဆိုတာကို လက်ခံလိုက်ပါ။ ပြီးရင် အဲဒီလိုအပ်နေတဲ့ အရည်အချင်းတွေကို ထပ်ဖြည့်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။
သင်ဟာ လမ်းပျောက်ပြီး အထီးကျန်နေသူပါ။ IT ခေတ်မှာ လူတွေဟာ အရာရာကို အင်တာနက်တွေ၊ အီးမေးလ်တွေကသာ ကူးလူးဆက်ဆံလာကြပါတယ်။ ဒါကိုမကောင်းဘူးလို့ အပြစ်ပြောလို့မရပေမယ့် လူတွေဟာ လက်တွေ့ဘဝနဲ့ တဖြည်းဖြည်းဝေးကွာလာတာကိုတော့ ဘယ်သူမှ မငြင်းနိုင်ပါဘူး။ သင့်ရဲ့ပြဿနာကလည်း ဒီ Social Media ဆိုတာကြီးကို စိတ်ကုန်စပြုနေတာပါပဲ။ သင်က အခြားသူတွေနဲ့ တစ်သီးတစ်ခြား ဖြစ်နေတယ်လို့ ခံစားနေရပြီး အထီးကျန်နေသူပါ။ စိတ်မညစ်ပါနဲ့။ သင့်လိုပဲ လက်တွေ့ဘဝမှာပဲ လက်တွေ့ကျတဲ့ စကားဝိုင်းတွေကို ဖန်တီးချင်တဲ့သူတွေ ရှိနေပါသေးတယ်။ သင့်ဘက်က စိတ်ကိုဖွင့်ပြီး ရင်းနှီးစွာ ကြိုဆိုနေတတ်ဖို့ လိုတာပါ။
၆) ငှက် ၂ ကောင်
သင်က တစ်စုံတစ်ယောက်ကို သင့်ခံစားတွေအကြောင်း ရင်ဖွင့်ပြောပြချင်နေတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့က သင့်ကို အရေးမပါဘူးလို့သတ်မှတ်လိုက်မှာကိုလည်း သင်စိုးရိမ်နေတယ်။ သင့်ခံစားချက်တွေကို လှောင်ပိတ်မထားပါနဲ့။ သူငယ်ချင်းနဲ့မိသားစုကို ယုံကြည်လိုက်ပါ။ နှစ်ပေါင်းများစွာ တခြားသူတွေကိုပဲ နှစ်သိမ့်ဖြောင့်ဖြပေးနေခဲ့ပြီး သင်ကတော့ ဘာမှမဖြစ်သလို နေခဲ့သူပါ။ ဒါကြောင့် သင့်မှာလည်း စိတ်ညစ်စရာတွေရှိတယ်၊ ဖွင့်ပြောပြဖို့ လူလိုနေတယ်ဆိုတာကို သင့်သူငယ်ချင်းတွေက သတိမထားမိတာပါ။ သင်သိထားရမှာက စိတ်ညစ်စရာတွေကို ထုတ်ပြောပြတာက အားနည်းတာမဟုတ်ပါဘူး။
သင်ဘာကို အရင်ဆုံး မြင်လိုက်လဲ? သင့်ခံစားချက်နဲ့ရော တိုက်ဆိုင်ရဲ့လား? ဒီနည်းလမ်းက သင့်ကိုယ်သင်သာမက သင်ချစ်တဲ့သူတွေ ဘာတွေခံစားနေရလဲဆိုတာပါ သူတို့မပြောပြဘဲ သိနိုင်ပါတယ်။ သင်ချစ်တဲ့သူတွေ ဘယ်လိုစိတ်ညစ်စရာတွေရှိနေလဲဆိုတာ အဖြေရှာကြည့်ရအောင်လို့ ဒီစမ်းသပ်ချက်လေးကို ဝေမျှကြည့်လိုက်နော်။
တောင်ပေါ်ကပြန်မဆင်းနိုင်တဲ့ ခွေးကြီးကို ကယ်ဆယ်ရေးသမား ၁၆ ဦးက သယ်ယူကယ်ဆယ်ပေးခဲ့
အချစ်ရေးမှာ အေးဆေးဖြစ်နေတဲ့ Transgender Women လေး သျှား
မျက်နှာ ၂ ခုဆက်နေတဲ့ ကြောင်ပေါက်လေး Biscuits, မွေးပြီး ၃ ရက်အကြာမှာ သေဆုံး
မိုးတွင်းမှာ FA တွေ နားထောင်ပြီး Feel နိုင်မယ့် မိုးသီချင်း (၁၀) ပုဒ်